Ajajaa kudhanii Birhaanuu Dirribaa: 'Yoo dhukaasni isinitti baname anatu dursee aarsaa isiniif ta'a' - BBC News Afaan Oromoo
Ajajaa kudhanii Birhaanuu Dirribaa: 'Yoo dhukaasni isinitti baname anatu dursee aarsaa isiniif ta'a'
2 Sadaasa 2019
Image copyright Walaabuu Jiloo
Guyyoota lama dura MM Abiy Ahimad fi hooggantootni biroon magaalaa Amboottii hawaasa waliin wayita mari'achaa turanitti muddama dhalate keessatti miseensi Raayyaa Ittisa Biyyaa harka bal'isee dargaggoota tasgabbeessuuf yaalu dubbii ijoo miidiyaa hawaasummaa ture.
MM Abiy, Obbo Lammaa Magarsaa fi Obbo Shimallis Abdiisaa galma hoteela Abbabachi Mattaafariyaa kessatti qaamolee hawaasaa gara agaraa waliin osoo mariitti jiranii dargaggootni magaalittii gaaffii qaban seenanii dhageessisuu dhorkamuu isaaniin ibsuun ture sagaleen mormii guddaa dhagaahamuu kan eegale.
Kana hordofees, haala Kana tasgabbeessuuf qaamoleen nageenyaa mootummaa hedduun magaalaa fi naannoo hoteelichaa bobbaafamaniiru.
Loltoota Raayyaa Ittisa Biyyaa kana keessa suurri loltuu meeshaa hidhate gadi rarraafatee harka bal'isee dargaggeeyyii kana tasgabbeessuuf yaaluu qalbii namoota hedduu harkiseera.
Loltuun kun eenyu?
Ajajaa kudhanii Birhaanuu Dirribaa Dhiinsaa jedhama. Aanaa Amboo ganda qotee bulaa Qibaa Qubee jedhamutti dhalate. Miseensa Rayyaa Ittisa Biyyaatti kan makame ALI bara 2006'tti.
Leenjiiwwan garaa garaa erga xumuree dirqama nagaa tasgabbeessuu mootummaan itti kennu bahuuf naannolee biyyattii garaa garaa keessa deemee hojjechuu hima.
'Qaamolee nageenyaa keessaa kan to'annoo jala oolan jiru'
MM Abiyyi Ahimad qabsoo Oromoo ni dagataniimoo milkeessuudhaaf dhama'aa jiru?
A.L.I Bara 2008'tti haalli nageenyaa wayita tasgabbii dhabee, mormiin cimee ture Naannoo Oromiyaa Godina Shawaa Kaabaa magaala Garba Gurraachattii ''lammii keenyatti hin dhukaasnu kan jedhurratti'' miseensota gidduutti falmiin uumamee akka ture wayita bilbilaan dubbifnu nutti himeera.
''Ajajaa ta'ee deemeetiin hin rukuchiifnu kaniin jedhuun falmiin ka'ee ture, ofii keenyaa walitti garagallee.''
Sababa kanaan dirqama kan biraan kennameefi naannoo gammoojjiitti erga ergamee booda, waraana kan keessaa bahuu fi waggaa tokkoo oliif hojii dhabaa ta'ee lubbuun barbaadamaa akka ture BBC'tti himeera.
''Ergan siiviilii ta'ee galee gidiraa baayyeen dabarse, ABO'tu gale jedhamee akkan ajjeefamuuf barbaadamaan ture.''
Erga MM Abiy gara aangootti dhufaniii booda, waamicha mootummaan miseensota waraana keessaa bahaniif taasiseen gara Raayyaa Ittisaatti deebi'uus ajajaan kudhanii Birhaanuu Dirribaa nutti himeera.
''...yoo dhukaasni baname kan dursee arsaa isiniif ta'u anadhaa tasgabbaa'aa dhaabbadhaa''
Magaala Ambootti lakkoofsi dargaggootaa heddummachaa mormiin dhageessisaniis cimaa yoo deemu ajajaa kudhanii Birhanuu Dirribaa miseensota Raayyaa Ittisa Biyyaa isa waliin turaniin ''harkaan itti hin bu'iinaa ofii isaanii wal haa ajajan'' jechaa akka ture dubbata.
''Haalli ture kan si'aani keessa nama galchuufi mijataa hin turre'' kan jedhu ajajaan kudhanii kun, wanti harka bali'isee jechaa ture maala akka ta'es ni dubbata.
''Sagalee dhageessisuun mirga keessanii hin baqatinaa, hin fiigiinaa, as keessatti dhiigni dhangala'uu hin qabu lubbuunis darbuu hin qabu yoo dhukaasni baname kan dursee arsaa isiniif ta'u anadhaa tasgabbaa'aa dhaabbadhaa.''
MM Abiy ABO'f odeeffannoo kennuu dhaabichi mirkaneesse
Dargaggoonni yaada isaa haalaan fudhachuu kan himu loltuun kun dargaggeeyyiin kaan obsa fixachiisuuf boombii hidhatee turetti bubbu'aa akka turaniis himeera.
Jaarsoliifi haadholiin siinqee dhufanii yoo dargaggoota kadhatan ijoolleen isin hin feenu jedhanii iyyaa akka turaniifi wayita kanattiis imimmaan isaa to'achuu akka dadhabe nutti himeera.
''Bakka rakkoon dhalatee dirqama fudhannnee demnutti yoo inni (ummatni) abidda baatee dhufe bishaan baattee itti dhiyaachuun dirqama'' yaada jedhus qaba ajajaan kudhanii Birhaanuun.
Suura isaa Miidiyaa Hawaasummaarratti yeroo argu maal jedhe?
Miidiyaa hawaasumaarratti namootni hedduun suura loltuu kanaa qooddachuun, Raayyaan ittisa biyyaa aantummaa uummataa akkasii fi kana nagaa buusuuf kadhatu ta'uu qaba jechuun loltuu fakkeenyummaa gaarii qabu ta'uu barreessaa turan.
Imala Amboo qabsoo siyaasaarraa gara misoomaatti
Dirqama isaanii xumuranii yeroo mooraa isaaniitti deebi'an hiriyyoonni isaa arganii akka isatti himan kan nuuf hime ajajaan kudhanii Birhaanuun, hojiin hojjedhe itti amanee waanan hojjedheef homaa hin sodaannee jedha.
Yeroon suuricha argu aniis gammachuutu natti dhagaahame jedhee namni akkitti hiikkatu gargar ta'uu isaatiin yaada namootni barreessan gargar ta'uu himeera.
Gariin 'Qeerroon Amboo Makkalaakayaa kadhachiise' kan jedhullee turee, namoonni hedduun yaada na jajjabeessu naa kennaniirus jedha.
Laggasaa Wagii ajjeefamuun dura MM Abiy ABO'f odeeffannoo kennuu dhaabichi mirkaneesse
Kantiibaa magaalaa Amboo: 'Qaamolee nageenyaa keessaa kan to'annoo jala oolan jiru'
26 Onkololeessa 2019
1 Sadaasa 2019
Gaa'ila danqaan itti heddummatu bulfachuun attamiin danda'ama?
Dambi Doollootti barataan tokko ajjeefame, yunivarsiitiiwwan kaan muddamatu jira
Dubartiin waa'ee qaama saalaa ishee wantoota beekuu qabdu shan
Zimbaabween doolaara mataashee hojiirra oolchite
Hilarii Kiliintan filannoo 2020'f dorgomuuuf 'dhiibbaa guddaa jala jirti'
Reebichi gara jabummaan poolisootaa hawaasa dheekkamsise
Jifaara saglan geerarsaa beektuu?
Pirezidantiin Boliiviyaa aangoorraa kaafame Meeksikootti koolugale